Kenya oo gacanta ku dhigtay labo gaari oo qaraxyo ku jiraan iyo dadkii watay oo la qabtey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo gacanta ku dhigtay labo gaari oo qaraxyo ku jiraan iyo dadkii watay oo la qabtey
Mareeg.com-Booliska dalka Kenya ee ku sugan magaalada dekeda leh ee Mombasa ayaa sheegay inay xereen labo ruux oo la sheegay inay wadeen gaadiid ay ku jireen waxyaabaha qarxa, sida ay sheegeen.
Ciidamada booliska ayaa sheegay in labada ruux oo mid u dhashay dalka Kenya kan kalana uu kasoo jeedo asal ahaan Soomaaliya ay qorsheynayeen inay weerar ka geystaan goob aan la cayimin, sida ay shaaciyeen.
Dowlada Kenya ayaa sheegtay inay adkeysay amaanka magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi waxii ka dambeeyay markii Alshabaab ay weerar ka geysteen dhismaha Westgate ee dalka Kenya.
“Ma sheegi karno halka bartilmaameydkoodu ahaa, laakiin waxaan xernay labo ruux oo gaadiid waxyaabaha qarxa ku waday”sidaasi waxaa yiri Henry Ondiekh oo ah taliyaha dambi barista magaalada Mombasa ee dalka Kenya.
Taliyaha ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in gaadiidka ay saarnaayeen labo qarax oo kuwa gacanta lagu sameeyo oo Mabeylo ay ku xernaayeen, kuwaasi oo la damacsanaa in qaraxyo lagu sameeyo, sida ay booliska sheegeen.
Bishii September sanadkii lasoo dhaafay ku dhawaad 67 ruux ayaa ku geeriyootay weerar Alshabaab ay ku qaadeen dhismaha ganacsiga dalka Kenya, waxaana ay Alshabaab sheegeen inay aheyd aargudis.
Bishii February ee sanadkaan dad badan ayaa kasoo muuqday maxkamada magaalada Mombasa, kuwaasi oo badankood lagu eedeynayay inay xiriir la leeyihiin Alshabaab, kadib markii masaajid ay weerareen ciidamada Kenya.
Alshabaab ayaa marar badan weeraro ka geystay dalka Kenya, waana midda ku qasabtay dowlada Kenya in ciidamadeeda ay kusoo biiraan howlgalka ka socda dalka Soomaaliya, sida madaxda Kenya ay sheegeen.
Ciidamada Dowlada oo degaano horleh shabaab kala wareegay